सबै ग्राहकलाई नयाँ प्रोटोकोल (IPv6) आईपी भी सिक्समा लैजाँदै वर्ल्डलिंक - TodayKhabar
सबै ग्राहकलाई नयाँ प्रोटोकोल (IPv6) आईपी भी सिक्समा लैजाँदै वर्ल्डलिंक
काठमाडौंः नेपालको पहिलो इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी वल्र्ड लिंक नेपालले यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वर्ल्डलिंकले आफ्ना सबै ग्राहकलाई आईपीभी सिक्समा लैजाने भएको छ । ग्राहकमाझ गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ कम्पनीले आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
वल्र्ड लिंकले जुलाई २०१९ मा आईपीभी सिक्सलाई इनेबल गरेको थियो । विश्वमा कमै मात्र आईएसपीहरुले यसलाई इनेबल गरेका छन् । भी सिक्समा जाँदा हामीले ग्राहकलाई अलि उत्कृष्ट इन्टरनेट सेवा दिन सक्छौं र सेवाप्रदाकहरुका लागि रिमोटली ग्राहको समस्या निवारण अलि सजिलो बनाईदिने कम्पनीले बताएका छन् । अहिले विश्वसँगै नेपाल पनि इन्टरनेट अफ थिङ्स (IoT) मा गइरहेको अवस्थामा त्यसलाई वृहत् बनाउन यस किसिमको तयारीलाई ठूलो विकासको संकेत मान्न सकिन्छ ।
एकअर्कासँग सम्पर्क स्थापित गर्न इन्टरनेटमा जोडिएका हरेक उपकरणलाई एउटा आईपी एड्रेस आवश्यक हुन्छ । यो एउटा यस्तो संख्या हो, जसलाई इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) एड्रेस (IP Address) भनिन्छ । यो एड्रेस इन्टर्नेट असाइन नम्बर प्राधिकरण (IANA) भन्ने अमेरिकी संस्था ले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु लाई बाँडफाँड गरी प्रदान गरेको हुन्छ । आईपी एड्रेसका दुई संस्करण हुन्छन् । एउटा आईपी भर्सन फोर ( IPv4) हो भने अर्को आईपी भर्सन सिक्स (IPv6 ) हो । सुरुको भर्सन आईपी भी फोरमा चार अर्ब ३० करोड वटा पब्लिक एड्रेसहरु छन् । जसका कारण यसको कोटा २०११ को अप्रिल १५ मा नै समाप्त भयो । परिणामत: पब्लिक भी फोरको अभावको समस्यालाई निराकरण गर्न अधिकांश इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु अहिले प्राइभेट एड्रेसिङको प्रयोगका लागि नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन (एन ए टी, NAT) प्रविधिमा निर्भर छन् ।
यो प्रोटोकलको पछिल्लो संस्करण भनेको आईपीभी सिक्स हो । आईपीभी सिक्सभित्र आईपी एड्रेस यति धेरै छन् कि जुन कहिल्यै समाप्त हुने छैनन् । जसले गर्दा विश्वमा भविष्यमा इन्टरनेटसँग जोडिने हरेक डिभाइसका लागि यसले छुट्टाछुट्टै रोउटेबल एड्रेस असाइन गर्ने क्षमता राख्छ । यसमा एनएटी (NAT) प्रविधिको आवश्यकता नहुने हुँदा यो आईपीभी सिक्समा आईपीभी फोरको तुलनामा इन्टरनेट एक्सेस अली राम्रो हुन्छ ।
हाल गूगल, फेसबुक जस्ता कन्टेन्ट सेवा प्रदायकहरुले आईभी सिक्स मा पनि सामग्री प्रदान गर्छन् । जसलाई हरेक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफ्ना प्रयोगकर्तासम्म पुर्‍याइरहेका हुन्छन् । हाल उपकरणको ईकोसिस्टममा पनि भी सिक्स र भी फोर दुवै इनेबल हुँदा प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा हुने ब्राउजर एप्लिकेसनहरुले स्वचालित रुपमा भी सिक्सलाई नै प्राथमिकतामा राखिरहेका हुन्छन् ।
हाल वर्ल्डलिंकका अनुसार हाल कम्पनीका चार लाख ग्राहकहरुमध्ये एक लाख ५५ हजार भी सिक्स प्रोटोकल नेटवर्कमा गइसकेका छन् । विर्ल्डलिंकले डेलिभर गर्ने कुल इन्टरनेट ट्राफिकको २० प्रतिशत अर्थात् १६५ जीबी इन्टरनेट ट्राफिक भी सिक्सका प्रयोगकर्ताहरुले प्रयोग गर्छन् ।
एसिया प्रशान्त नेटवर्क इन्फर्मेसन सेन्टर (APNIC), गूगल र फेसबुकको तथ्याङ्क अनुसार हाल विश्वको करिब २६ प्रतिशत नेटवर्क भी सिक्समा छ । यस्तै नेपालको ११ प्रतिशत नेटवर्क आईपीभी सिक्स गएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै योगदान आफ्नै रहेको वर्ल्डलिंकको छ । यसले इन्टरनेटलाई छिटो र व्यापक मात्र हैन साथै यसले इन्टरनेट सुरक्षा समेत बढाउन मद्दत गरेको छ । सरकारी तथा नियामक निकायहरुलाई गैरकानूनी गतिविधि ट्रयाक गर्न समेत सजिलो बनाऊनेछ , जुन कुरा आईपीभी फोरमा नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन NAT को कारण ले गतिविधि ट्र्याक गर्न निकै कठिन हुन्छ ।
राजपा र समाजवादीबीच एकताका लागि औपचारिक रुपमा केही पनि भएको छैनः अनिल झा
चीनमा कोरोना भाइरसको प्रकोपः नेपाली विद्यार्थी फर्किदैंं (नामावली सहित)
बाँकेमा शुक्रवार थप एउटै वडाका ४१ जना कोरोना संक्रमितहरु निको भएर घर फर्किदै
कुनै पनि काम मधेसी नेताको कारणले भएको हो जनता मान्न तयार छैनन्, विकल्पको खोजीमा छन्ः प्रध्यापक एवं अनुसन्धानकर्ता मिश्र
आज कुशे औँसी, बुवाको मुख हेर्ने दिन : प्रविधिको प्रयोगबाट नै परम्परा जोगाउन आग्रह
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै, पौडेल पक्षले बहिष्कार गर्ने
नेपाल भारत महिला मैत्री समाजद्वारा कैलाली जिल्लामा टेन्ट तथा त्रिपाल वितरण
भारतद्धरा नेपाललाई औषधी प्रदान
कोरोनाका बिरामीलाई बचाउन जब डाक्टर आफैं एम्बुलेन्स चालक बने‘
बालिकालाई भारतीय नागरिकले बलात्कारपछि हत्या गरेको पुष्टि
सभापति देउवाले कांग्रेसलाई संकटमा पारे : पौडेल
वामदेव गौतमको गुनासो– मलाई चुनाव हराउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भयो
पूर्वमाओवादी समूहको प्रचण्डसँग छुट्टै छलफलः कुनै पनि हालतमा सभामुख नछाड्न सुझाव
Copyright ©2020 | All rights reserved. TodayKhabar. Hosted By: Web Hosting in Nepal